Nlekọta nlekọta | Law & More B.V. | Eindhoven na Amsterdam
blog » Nlekọta nlekọta
Nlekọta nlekọta (nke na-esote 'SB') bụ ahụ BV na NV nke nwere ọrụ nlekọta na amụma nke ndị njikwa na usoro izugbe nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ agbakwunyere ya (Nkeji edemede 2: 140/250 paragraf 2) nke Dutch Civil Code ('DCC')). Ebumnuche nke isiokwu a bụ inye nkọwa zuru oke banyere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a. Nke mbu, a kọwara ya mgbe SB chọrọ iwu yana etu esi ahazi ya. Nke abuo, a na-edozi isi ọrụ nke SB. Na-esote, a kọwara ike iwu nke SB. A na-atụle ike nke SB n'ime ụlọ ọrụ ọkwa abụọ. N'ikpeazụ, isiokwu a na-ejedebe na nchịkọta dị mkpirikpi dị ka nkwubi okwu.
Nhọrọ nhọrọ na ihe ndị ọ chọrọ
Na ụkpụrụ, ịhọpụta SB abụghị iwu maka NVs na BVs. Nke a dị iche n'ihe banyere a ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ dị mkpa (leekwa n'okpuru). Ọ nwekwara ike ibu ọrụ na-esote ọtụtụ ngalaba ngalaba (dịka maka ụlọ akụ na ndị mkpuchi n'okpuru edemede 3: 19 nke Iwu Nlekọta Ego). Enwere ike ịhọpụta ndị isi nlekọta naanị ma ọ bụrụ na enwere ụkpụrụ iwu maka ịme nke a. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike ịhọpụta onye nlekọta nlekọta dị ka ndokwa pụrụ iche na nke ikpeazụ usoro nyocha, nke a chọghị ntọala dị otú ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ ahọrọ maka ụlọ ọrụ nhọrọ nke SB, onye ọ bụla kwesịrị ịgụnye ahụ a na njikọ nke mkpakọrịta (na mgbakwunye nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ mgbe e mesịrị site na ịmegharị isiokwu nke mkpakọrịta) Enwere ike ime nke a, dịka ọmụmaatụ, site na ịmepụta ahụ kpọmkwem na njikọ nke mkpakọrịta ma ọ bụ site na ime ka ọ dabere na mkpebi nke ụlọ ọrụ dịka nzukọ izugbe nke ndị na - ekenye gị ('GMS'). O nwekwara ike ime ka ụlọ ọrụ ahụ dabere na ndokwa oge (dịka otu afọ mgbe etinyere ụlọ ọrụ) mgbe nke a gasịrị, a chọghị mkpebi ọzọ. N'adịghị ka bọọdụ ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịhọpụta ndị iwu ka ndị isi nlekọta.
Ndị nduzi nlekọta vs. ndị isi na-abụghị ndị isi
E wezụga SB na nhazi ọkwa abụọ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ usoro nhazi otu ọkwa. N’okwu ahụ, kọmitii nwere ụdị ndị isi abụọ, ya bụ ndị isi nchịkwa na ndị isi na ndị isi. Ọrụ nke ndị isi na-abụghị ndị isi na nke ndị isi nchịkwa na SB bụ otu. Yabụ, edemede a metụtara ndị isi na-abụghị ndị isi. Mgbe ụfọdụ a na-arụ ụka na n'ihi na ndị isi na ndị isi na ndị isi na-anọdụ n'otu otu, enwere ụzọ dị ala maka ọrụ nke ndị isi na-enweghị isi n'ihi enwere ike ị nweta ozi. Otú ọ dị, echiche dị iche iche na nke a na, ọzọkwa, ọ dabere na ọnọdụ nke ikpe ahụ. Ọ gaghị ekwe omume ịnwe ma ndị isi na ndị isi na SB (edemede 2: 140/250 paragraf 1 nke DCC).
Ọrụ nke Board Supervisory
Ọrụ nke iwu nke SB na-agbadata na nlekọta na ọrụ ndụmọdụ gbasara ndị isi nchịkwa na usoro ọrụ ụlọ ọrụ (edemede 2: 140/250 paragraf 2 nke DCC). Na mgbakwunye, SB nwekwara ọrụ dị ka onye na-arụrụ ndị ọrụ njikwa ọrụ, n'ihi na ọ na-ekpebi ma ọ bụ opekata mpe nwere oke mmetụta na nhọrọ, (re) nhọpụta, nkwusioru, nchụpụ, ụgwọ ọrụ, nkewa nke ọrụ na mmepe nke ndị otu njikwa. . Agbanyeghị, enweghị mmekọrịta ndịiche n'etiti ndị isi njikwa na SB. Ha bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere ọrụ ha na ike ha. Isi ọrụ nke SB na-emeso ya n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Ọrụ nlekọta ahụ na-egosi na SB na-enyocha iwu nchịkwa na usoro izugbe nke ihe omume. Nke a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ịrụ ọrụ nke njikwa, atụmatụ ụlọ ọrụ, ọnọdụ ego yana ịkọ akụkọ metụtara ya, ihe egwu nke ụlọ ọrụ ahụ, nnabata na usoro mmekọrịta ọha na eze. Na mgbakwunye, nlekọta nke SB na ụlọ ọrụ nne na nna na-agbakwunye na iwu otu. Ọzọkwa, ọ bụghị naanị maka nlekọta mgbe eziokwu gachara, kamakwa maka ịtụle iwu (ogologo oge) a ga-etinye n'ọrụ (dịka itinye ego ma ọ bụ atụmatụ amụma) n'ụzọ ezi uche dị na oke njikwa nnwere onwe. Enwekwara nlekọta nke ndị na-ahụ maka ndị nlekọta na-ahụ maka ibe ha.
Na mgbakwunye, enwere ọrụ ndụmọdụ nke SB, nke metụtara usoro iwu njikwa niile. Nke a apụtaghị na ndụmọdụ dị mkpa maka mkpebi ọ bụla ndị njikwa ahụ mere. Emechara, ịme mkpebi na ọrụ ụlọ ọrụ kwa ụbọchị bụ akụkụ nke ọrụ njikwa. Ka o sina dị, SB nwere ike inye ndụmọdụ na ịrịọ arịrịọ. Ekwesighi ịgbaso ndụmọdụ a n'ihi na kọmitii ahụ, dịka o kwuru, kwụụrụ onwe ya na mkpebi ya. Ka o sina dị, a ga-agbaso ndụmọdụ nke SB nke ukwuu n'ihi oke ibu SB na-etinye na ndụmọdụ ahụ.
Ọrụ SB anaghị agụnye ikike ịnọchite anya ya. Na ụkpụrụ, SB ma ọ bụ onye ọ bụla so na ya nwere ikike ịnọchite anya BV ma ọ bụ NV (ma e wezụga obere usoro iwu). Ya mere, enweghị ike itinye nke a na edemede nke mkpakọrịta, belụsọ na o sitere na iwu.
Ike nke Nlekọta Nlekọta
Na mgbakwunye, SB nwere ikike nwere nọmba na-esote iwu statut ma ọ bụ usoro mkpakọrịta. Ndị a bụ ụfọdụ ike dị mkpa nke SB:
Ike nkwụsịtụ nke ndị isi, belụsọ na edepụtara ya na edemede nke mkpakọrịta (edemede 2: 147/257 DCC): kwụsịtụrụ onye isi ọrụ na ọrụ ya na ike ya, dị ka isonye na mkpebi na nnọchite.
Na-eme mkpebi ma ọ bụrụ na ọdịmma nke ndị isi njikwa ihe (edemede 2: 129/239 subsection 6 DCC).
Nkwado na ịbịanye aka maka atụmatụ njikwa maka mmakọ ma ọ bụ demerger (edemede 2: 312 / 334f sub 4 DCC).
Nkwenye nke akụkọ kwa afọ (edemede 2: 101/210 subsection 1 DCC).
N'ihe banyere ụlọ ọrụ edepụtara: ịgbaso, na-akwado ma na-ekpughe usoro ụlọ ọrụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Nlekọta nlekọta na ụlọ ọrụ iwu abụọ
Dịka e kwuru n'elu, ọ bụ iwu ịkwado SB na ụlọ ọrụ iwu abụọ. Ọzọkwa, bọọdụ a nwere ikike usoro iwu ọzọ, na-akwụ ikike nke Nzukọ Ezumezu nke Ndị Nwekọrịta. N'okpuru usoro mbadamba okpukpu abụọ, SB nwere ikike ịkwado mkpebi nchịkwa dị mkpa. Na mgbakwunye, n'okpuru sistemụ ọkwa abụọ zuru oke SB nwere ikike ịhọpụta na ịchụpụ ndị otu njikwa (edemede 2: 162/272 DCC), ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ ma ọ bụ nke pere mpe nke a bụ ike nke GMS (edemede 2: 155/265 DCC). N'ikpeazụ, na ụlọ ọrụ iwu nke ụlọ ọrụ abụọ ka a na-ahọpụta SB site na General Nzukọ Ndị Na-ere Ihe, ma SB nwere ikike iwu kwadoro ịhọpụta ndị nduzi nlekọta maka nhọpụta (edemede 2: 158/268 (4) DCC). N'agbanyeghị eziokwu na GMS na Council Council nwere ike ikwu, SB anaghị agbanye aka na nke a, ewezuga ntinye ntinye maka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke SB site na WC. GMS nwere ike jụ nhọpụta site na oke ọgụgụ nke votu ma ọ bụrụ na nke a na-anọchite otu ụzọ n'ụzọ atọ nke isi obodo.
Atụrụ anya na edemede a enyela gị ezigbo echiche gbasara SB. Iji chịkọta, yabụ, belụsọ na ibu ọrụ sitere na iwu a kapịrị ọnụ ma ọ bụ mgbe usoro ọkwa ọkwa abụọ ga-emetụta, nhọpụta nke SB abụghị iwu. Wish chọrọ ime otú ahụ? Ọ bụrụ otu a, enwere ike itinye nke a na isiokwu mkpakọrịta n'ụzọ dị iche iche. Kama SB, enwere ike ịhọrọ usoro otu ọkwa. Ọrụ ndị bụ isi nke SB bụ nlekọta na ndụmọdụ, mana na mgbakwunye SB nwekwara ike ịhụ dị ka onye were ọrụ nke njikwa ahụ. Ọtụtụ ike na-esote iwu ma nwee ike ịgbaso usoro mkpakọrịta, nke kachasị mkpa nke anyị edepụtara n'okpuru. N'ikpeazụ, anyị egosila na n'ihe banyere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọkwa abụọ, ọtụtụ GMS na-enye GMS na SB na ihe ha gụnyere.
You ka nwere ajụjụ mgbe ị gụsịrị edemede a gbasara kọmitii nlekọta (ọrụ ya na ike ya), ịtọlite ​​kọmitii nlekọta, usoro ọkwa otu ọkwa na ọkwa abụọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ọkwa abụọ? You nwere ike ịkpọtụrụ Law & More maka ajụjụ gị niile n’isiokwu a, kamakwa n’ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ. Ndị ọka iwu anyị nwere ọkachamara na ndị ọzọ, n'etiti ndị ọzọ, iwu ụlọ ọrụ ma dịrị njikere mgbe niile inyere gị aka.
Previous Post Insịns na outs nke ụlọ ọrụ iwu abụọ
Next Post Ọrụ nke ndị nlekọta na oge nlekọta nsogbu